Guddoomiyaha UCID: Qaar Ka Mid Ah Danaha Dhaqaale Ee Maskaxdiisa Dooriyay!..W/Q Siciid Maxamuud Gahayr | Baligubadlemedia.com
Guddoomiyaha UCID: Qaar Ka Mid Ah Danaha Dhaqaale Ee Maskaxdiisa Dooriyay!..W/Q Siciid Maxamuud Gahayr
Guddoomiyaha UCID: Qaar Ka Mid Ah Danaha Dhaqaale Ee Maskaxdiisa Dooriyay!
Waxyaabaha ugu badan ee habseeyay Guddoomiyaha UCID ee bahda ka saaray waxa ka mid ah dhaqaale-doon, shilin iyo adduunyo-raadis dhiciseeyay hankiisii. Qofnimadiisii ayuu sare-joogga ku iibsaday. Taasina waa ta keentay in uu ku nabnaado hadba cidda uu dhac-dhac ka helayo.. Anigu waxa aan taas ka sheegayaa wixii aan ka ogaa ee aan warkooda hayo. Waa xilliyadii uu Axmed-Siilaanyo ahaa madaxweynaha Somaliland (2010-2017), imakadan qudheeda ma qatana! Xilligii UDUB yaa ka war haya sidii gacanta loo dhiibi jiray?
“Amakaagay goortay wankii, adhaxda tuujeene” Ismaaciil Mire.
Wasiirkii Hawlaha Guud, Guryaynta iyo Gaadiidka Somaliland Md Cali Xasan Maxamed (Mareexaan) ayaa 2017kii sheegay in la siiyay dhul uu qiimihiisu yahay $450,000. Markiiba inta uu jeebka ku shubtay ayuu ka dhistay fooq masallaha ku yaalla. Marar badan ayuu iska dhigayay nin ku shaqeeya samafal, oo aan hanta ka samaysan. Marar kale waxa uu Wasiir Cali-Mareexaan kala hadlay dhul u xayiran madaarka oo uu rabay in la fasaxo. Sida uu masuulku sheegay waxoogaa lacag ah ayaa ugu dhex jiray.
Aniga oo Golaha Dhexe ee UCID ayaa la i xidhay 20kii Ogos 2016kii waa uu diiday in uu toos uga hadlo. Waxa uu yidhi”Waxa ka fiican in aan la hadlo cidda uu u xidhan yahay”. Waayadaas waxa socday mashaariicdii kiraynta dekedda Berbera. Aniga oo xidhan ayaa 8dii Sebtember 2016ka xaflad ku saabsan Marsada Berbera lagu qabtay Greenplaza. Wuxuu kaga dhabeeyay “martiyi, marti way ka naxdaa”. Shaw nin wax quudaya ayay qoollaaliyeen!
Faysal waxa uu yidhi “Tilifoonno badan ayaa igu soo dhacaya. In aanu lacag soo qaadnay baa la moodayaa. Imakaba waxba ma aannu soo qaadin”. Dooddayda waxa ay cubba-dhawr ku ahayd tuumbo dheer iyo macmacaan la muudmuudsanayay. Intaas uu awooday ayaan ku mahadinyaa..
Markii dambe ee la soo qaaday lacagtii xaqul-qalinka, waxa ay saxaafaddu gudbisay Faysal oo leh”Wasiirkii Madaxtooyadu wuu iga dhuuntay”. Taas macnaheedu waxa weeye waxa aan meesha ugu dhex jiro dillaalid, mallafsi iyo boob.
Haddii aad aragto isaga oo qaylinaya, dan baa ku dhex jirta. Mucaaridimo, dal-jacayl iyo waddaniyad ma aha. Waa qadhaabkii oo kala goay. Wuxuu inoo sheegay in uu ubadkiisa u dayacay Somaliland, fooqyadu ma xoogsi baa? Adeer ugama aad iman Yurub bilaash… Ma nin ayaa gawaan ubadkiisa dhaafsada. Waad u tacabtay: booli iyo xalaal annagu kala garan maynno. Haddii aad gacanta hoos dhigato xisbigii aad toosin lahayd, miyaanad xaraashin dadnimadii? Miyaad wax ka sheegi kartaa ama aad waajibaadkaaga xisbinnimo gudan kartaa?
Hawlihii Khaatumo ee uu waday, Safar Jarmalka ah (2018) oo ay isaga iyo Cali Khaliif kaga qaybgaleen mashaariic Soomaalida loo qorsheeyay, shirkii uu 18kii Juun 2018kii kula kulmay Madaxweyne Farmaajo ee Beljimku dhammaan waxa ay ku lug lahaayeen dano, dhaqaale iyo waxoogaa kuuskuus ah. Haddii aanu qandhiidho wadin, muxuu dhammaystirka heshiiska Khaatumo uga qayb geli waayay?
Sannadkii 2014ka waxa Somaliland laga bilaabay diiwaangelinta madaniga ah. Shir aan bishii Afraad ee sannadkaas la joogay warbaahinta oo uu la shirayo Wasiirkii Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Warancadde, wuxuu noo sheegay inay dhammaanayaan madaniga iyo ta codbixiyuhu Ogos 2018ka. Tii madaniga oo keli ah ayaa la bilaabay Oktoobar 2014ka kaddib markii laga ansixiiyay Xisbiyada iyo wakiillada. Murashaxii UCID Jamaal Cali Xuseen oo qudha ayaa tallaabadaas diiday. Faysal waxa uu qaatay qabaxdiisa. Waa sababihii dib u dhigay doorashadii 2015ka.
28kii Sebtemer 2013ka waxa KULMIYE ku biiray Duqa Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan iyo Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf oo UCID ka soo baxay sannadkii 2012ka. Haddaba, sababma ayuu Xisbiga UCID markaas maxkamad u saari waayay xildhibaannada ka soo baxay UCID ee ku biiray KULMIYE?.
Dacwaddii lagu oogi lahaa, waxa la baajiyay kaddib markii uu Guddoomiye Faysal Cali Waraabe ka tanaasulay in sharciga la mariyo xildhibaannadan. In la kala qaatay waxoogaa fara-guudkood ah baa xan nagu soo gaadhay. Mar dambe ayuu hinaase ka daba bilaabay oo ay lix xildhibaan oo UCID ahi ku biireen KULMIYE 6dii Feb 2017ka, waa ku dhawaad afar gu’ kaddib. Ninka 2013 ku biiray KULMIYE maxaad 2017 ka dacwayn, sawdigii ogaa? Mise mar labaad ayaa la ruxanayaa?
Saw lama arag isaga oo sannaadhaya marka laga reebo wada-hadalka Somaliland iyo Soomaaliya? Qudhiisa waxoogaa qabax (perdium) ah ayaa ku dhex jiray. Marka aad qiimihii ummadda, qaayihii iyo milgihiiba adiga oo 72 jir ah dhaafsato, ma karaamo ayaa kuu nool.
Waagaas aanu xibsiga ku jirnay (2011-2016) isaga ayaa maamulan jiray lacagta xisbiga ee miisaaniyadda ugu jirta UCID. Mooyi meel uu geyn jiray.. Waashmaan, laba shaqaale ah iyo kirada hal guri ayuu ka bixin jiray. Inta kale mooyi meel ay maraysay.. Ma garanyo in uu jin kula jiray hagbad..
Dumarka ayaa ku heesi jiray:
Qamareey qorqode wuu qayliyaa
“Riyahaas qal oo qari” buu i yidhi
“Reerkiinna tuurtuur” buu i yidhi
Mar haddii uu Injineer Faysal Cali Waraabe ka leexday ujeeddadii Xisbiga UCID loo soo saaray ama loogu codeeyay 2002 iyo 2012kii…. Laga aammusi maayo..
La soco qaybta labaad iyo berri idanka Alle
Sidaas iyo cibaadaysi wanaagsan..